Shanghai Hongqiao transportation hub, the company specializes in R & D, mmepụta na ahịa nke eyewash. Site n’afọ 2004 rue ugbu a, anyị mepụtara ma mepụta usoro iri na otu na ụdị ihe eji eme nkuanya iri atọ. Anyị ahịa olu na technology dị na-eduga ọnọdụ na China. Companylọ ọrụ ahụ ejirila ISO 9001: 2008 asambodo usoro asambodo, ISO 14001: asambodo njikwa gburugburu ebe obibi 2004, OHSAS 18001: asambodo ọrụ ahụike na nchekwa njikwa 2007, nwetara asambodo nke ngwaahịa ngwaahịa China dị mma, wee merie Shanghai. Ebe E Si Nweta ntozu ntozu "AAA".
Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ agabigala asambodo American ANSI z358.1, European CE en15154-1: asambodo 2006, asambodo CCS nke China Classification Society, nwetara asambodo patent 9 na ọtụtụ mpempe akwụkwọ nhazi; rube isi na "ihe ohuru ohuru na mmepe" dika ihe na-akwalite mmepe Bohua, payaa ntị na mmelite na nyocha na mmepe nke ngwaahịa eji asa anya, nke mere na teknụzụ nkuanya na-anọgide na-eduga ọnọdụ
Shanghai Bohua nwere ezigbo ọkachamara R & D. Ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ole na ole na China nwere ike ịzụlite ma mepụta ngwaọrụ anya ya n'onwe ya. Na a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke magburu onwe oru pesonel na ike R & D ike, ụlọ ọrụ mepụtara ihe karịrị iri usoro na ọtụtụ narị anya asacha ngwaọrụ, na nwetara ọtụtụ patent asambodo, ngwaahịa mma asambodo, Chinese ama ika ngwaahịa, iguzosi ike n'ezi ụlọ ọrụ, wdg Ọtụtụ nsọpụrụ.
The ụlọ ọrụ nwere ike hazie nile di iche iche nke unconventional eyewash dị ka mkpa n'ezie nke ndị ahịa. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ọtụtụ ihe eji eme ka anya na-acha ọhụụ, dị ka ihe eji eme ka eyewash, ihe nrụgide eyewash tank, uzuoku eyewash ngwaọrụ, dịka ihe onye ahịa ọ bụla chọrọ.
Ezigbo ndị ọrụ ntanetị na ike R & D siri ike bụ nkwa dị ike maka Bohua iji mee ka teknụzụ na-eduga na ụlọ ọrụ ndị na-asacha anya na ike na-eme ka Bohua gaa n'ihu.
GTS American Asambodo Asambodo
CCS asambodo nke Classification Society
Ikike nchedo ọrụ pụrụ iche